पहिचानसहितको संघीयता नभए पार्टीबाट अलग नै हुने हो : रामचन्द्र झा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य
एकल जातीयको विषयले एमालेमा विवाद चर्किएको छ । एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता नभए जनजाति र मधेस केन्दि्रत नेताहरु एमालेबाट अलग हुने बताएका छन् । यता पार्टीको अनुशासन आयोगले एक हप्ताभित्र पार्टी विपरीत गएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको छ । अब असन्तुष्ट नेताहरु के गर्दछन भन्नेका केन्दि्रत रहेर एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रामचन्द्र झासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको विषयले एमालेमा विवाद चर्किएको छ । एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता नभए जनजाति र मधेस केन्दि्रत नेताहरु एमालेबाट अलग हुने बताएका छन् । यता पार्टीको अनुशासन आयोगले एक हप्ताभित्र पार्टी विपरीत गएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको छ । अब असन्तुष्ट नेताहरु के गर्दछन भन्नेका केन्दि्रत रहेर एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रामचन्द्र झासँग ओएनएसका लागि लोकेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण माग्यो, अब दिनु हुन्छ, होला नी ?
दिने हो । के विषयको स्पष्टीकरण हो, हातमा आएपछि हेरेर एक पेजको पाँच पेजसम्म दिने हो ।
के कारणले आफूहरुमाथि स्पष्टीकरण सोधिन लाग्यो भन्ने लागेको छ ?
पार्टीका पूर्वनिर्णित, निर्णयहरु खासगरी राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा सातौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र बाह्रौ बैठकबाट भएका निर्णयहरु, संविधानसभा निर्वाचनपछि घोषणा भएका र आठौं महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदनमा उल्लेल भएका विषयहरु, मेरो नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएका निष्कर्षहरु, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सौद्धान्तिक निष्कर्षहरु, बामदेव गौतम नेतृत्वले दिएको वा सुझाएको प्रदेशको नामाकरण, पहिचानसहितको विषय पार्टीको पूर्व निर्णयहरु हुन ।
जसको आधारमा हामीमा राज्य पुनर्संरचनामा भोटिङ गरेर १४ प्रदेश पारित गरेको हो । फेरि आयोग बनाउने विषयमा पार्टी गयो । केन्द्रीय कमिटी आयोग बनाउँने विपक्षमा थियो । आयोगले सुझाव मात्रै दिने हो, भन्दै कांग्रेसले भनेको विषयमा हाते मालो गरेर जानु भयो । पछिल्लो समयको काम जुन नेतृत्वले गर्‍यो, त्यो पार्टी निर्णय विपरीत गरेको छ । मैले आफ्ना विमतीहरु पोलितब्यूरो बैठकमा राखे, स्थायी कमिटी बैठकमा पनि ती विषय पुगेका हुन ।
पार्टी सच्चीनु पर्ने हो तर सच्चीएन झन अल्टो दिशातिर गएको छ । बामदेव गौमत एक व्यक्तिले राखेका मत तल्लो तहसम्म लैजाने, हामी एउटा समूहले नै राखेको विचार तलसम्म लग्न नपाउँन ? यो कस्तो अन्र्तरसंर्घष हो । यो भन्दाअघि विभिन्न जिल्लाहरुमा समानान्तर कमिटी बनाउँनेलाई यो अनुशासन आयोगका पदाधिकारीले कारवाही गर्न जरुरत ठानेका थिएकी थिएनन् ? ठानेको भए त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने । त्यो नगरी अनुशासनहिन काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु त भएन । यस्तो अवस्थामा हामीहरुसँग स्पष्टीकरण सोध्ने कुनै अर्थ छैन । र सोध्ने नैतिक अधिकार पनि छैन ।
पार्टीको विधान सबैका लागि एउटै हो । कसैले समान्तर कमिटी खोल्दा विधान मौन बस्ने । कोही आफ्नो विचार लक्षीत वर्गसम्म पुर्‍याउन खोज्दा त्यसलाई निष्तेज पार्न खोज्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादको नितान्त अभाव हो ।
पार्टीमा एकाधिकार लादन खोजिएको हो । एउटैमात्र समुदायका व्यक्तिहरु पार्टीमा रहनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट पे्ररितले यस्तो गरेका हुन । यो विषयमा नेतृत्वले सोँच्नु पर्छ ।
तपाईहरुले आत्मालोचना गर्ने हो ?
आत्मालोचना गर्ने कुरै छैन । प्रश्नै उठदैन । गल्ती गरेकै छैनौ । पार्टीले अन्तिममा सम्म गल्ती गरेको छ, राज्य पुनर्संरचनामा । संविधानसभामा यो दुनियाँमा कतै नभएको हुइप लाग्छ ? संविधानसभाको म्याद सकिने ३० घण्टा बाँकी हुँदा संविधान बनाउँनतिर नलागेर पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको हस्तक्षर गर भन्नु भयो ।
हामीले विरोध गर्‍यौ । संविधान निर्माणमा खर्चिनु पर्ने समय किन प्रधानमन्त्री हटाउन खर्चिनु । संविधानसभा विघटन हुनुमा एमाले जिम्मेवार छ । संविधानसभाको अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ एमाले कै व्यक्ति भएकाले संविधानसभा विघटन हुनुमा एमाले नै जिम्मेवार छ ।
संविधानसभाको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेन यो बैठक बसाल्न नसक्नु कमजोरी कस्को हुन्छ ? होला माओवादीमा पनि केही रुपमा ।
अन्तिममा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता नभए के गर्ने ?
पार्टीले यो स्वीकार गर्छ, भन्नेमा आशावादी छौं । यदी पहिचानसहितको संघीयता नभए पार्टीबाट अलग नै हुने हो । त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन । Comments